किन प्रधानमन्त्री के पी ओली स्वार्थि हुन् र प्रवृति घटिया हो ? - समय-समाचार
किन प्रधानमन्त्री के पी ओली स्वार्थि हुन् र प्रवृति घटिया हो ?
१८ बैशाख २०७७, बिहीबार ०८:४३
लेखक: नारायण गाउँले
तर यो बहुमत दुई वर्षभित्रै बेजिंग-काठमाडौं चल्ने चुच्चे रेलका लागि हो । दुई वर्षभित्र घरघरमा पाइपबाट आउने ग्यासका लागि हो । दुई वर्षभित्र उत्तरतिर सातवटा नाका खोल्नका लागि हो । दुई वर्षभित्र हावाबाट बिजुली निकाल्ने र स्याटेलाइटबाट बेचेर धनी बन्नका लागि हो । दुई वर्षभित्र सात वटा स्मार्ट सिटी बनाउन र देशभर विद्युतीय बस चलाउने भाषणका लागि हो । यो बहुमत एकता, स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि हो । अलिकति बढ़ी नाकाबन्दीको विरोधका लागि हो ।
(यो लेख नारायण गाउँलेको फेसबुक बाट साभार गरिएको हो । यसको शीर्षक समय समाचार टिमले राखेको हो ।)